ऋषि धमलाले कुलमानको बि`रुद्ध बोल्ने मुकेश काफ्लेलाई अन्तरबार्तामै थर्काउदै भने:मुख ठिक ठाउँमा राख्नुस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/ऋषि धमलाले कुलमानको बि`रुद्ध बोल्ने मुकेश काफ्लेलाई अन्तरबार्तामै थर्काउदै भने:मुख ठिक ठाउँमा राख्नुस !
काठमाडौं, ११ भाद्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रति अस`न्तुष्ट छन् । आफूले विगतमा खडा गरेको आधारले विद्युतका क्षेत्रमा भएको सका`रात्मक नतिजाको जस कुलमानले लिएको उनको आरोप छ । तर, उनले केही काममा भने कुलमानको प्रशंशा गरे ।
‘उहाँले विद्युत चु`हावट घटाउनु भएको हो,’ मुकेश का`फ्लेले ऋषि धमला सँग जनता जान्न चाहन्छन्मा भने । कुलमानको कार्यकालमा विद्युत चुहा`वटमा राम्रो सफलता भएको उनको भनाई थियो । तर, अरुलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो देखिन खोजेको आरोप लगाए ।